उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठ समापन (तस्वीरमा यस्तो देखियो) | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठ समापन (तस्वीरमा यस्तो देखियो)
on: २८ कार्तिक २०७५, बुधबार १२:३५ मुख्य खबर, समाचार
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११, नहरपुरमा बुधवार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै व्रतालु ।
कात्तिक २८, काठमाडौं । बुधवार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजाआजासहित अर्घ्य दिई चार दिन लामो छठ पर्व समापन गरिएको छ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने पर्वको मुख्य दिन मङ्गलवार अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजाआजासहित अर्घ्य दिइएको थियो । उपत्यकाका गुह्येश्वरी, कमलपोखरी, गहनापोखरी, शङ्खमूल, थापाथली, वाग्मती, विष्णुमती र नख्खु नदी किनारका अन्य स्थानमा पनि छठीघाट निर्माण गरी सूर्यदेवको आराधना र उपासना गर्न भक्तजनको भीड लागेको थियो ।
गुह्येश्वरी मन्दिरअघिको वाग्मतीबाट गौरीघाटसम्मको नदी किनारको दायाँबायाँ बेहुलीझैँ सिङ्गारेर छठ घाट बनाइएको थियो । लाखौँ भक्तजनले मङ्गलवार बेलुकी यहाँ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका थिए । तिनै भक्तजनले बुधवार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर चार दिन लामो सूर्य उपासना पर्व अन्त्य गरेको छठ पूजा समितिका सदस्य चन्द्रकान्त यादवले जानकारी दिए ।
उखुको लाँक्रा र केराको घरीसहित पूजा सामग्री लिएर भक्तजनले नदी किनारमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको उपासना गरेका थिए । आइतवार बिहान स्नान गरी चोखो नितो गरेर बसेका बर्तालुले बुधवार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठ मनाएमा मनोकाङ्क्क्षा पूरा हुने, छाला एवम् आँखाका रोग नलाग्ने धार्मिक विश्वास छ । दुई दशक अघिदेखि राजधानीमा शुरु भएको छठमा प्रत्येक वर्ष सहभागी हुने भक्तजनको सङ्ख्या बढिरहेको छ । वि.सं. २०४६ अघि छठ तराई क्षेत्रमा मात्र मनाइन्थ्यो । हाल पहाडी क्षेत्रसहित प्रमुख शहरमा छठको रौनक बढ्न थालेको छ । यस पर्वमा पहाडी क्षेत्रका मानिस पनि उत्तिकै सहभागी हुन थालेका छन् । तराई र पहाडका मानिसका बीच सामाजिक सद्भाव बढाउने पर्वका रुपमा छठ स्थापित हुन थालेको छ ।
रुपन्देहीको शुद्धोद्धन गाउँपालिका–१ स्थित घमाहा खोलामा सूर्य देवको आरधाना गर्दै स्थानीयवासी ।
बुधवार बिहान छठ सकिएपछि नदी किनारमा सफाइ अभियान शुरु गरिने वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले जानकारी दिए । सफाइमा काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का सांसद गगनकुमार थापा, गुह्येश्वरी विनायक युवा क्लबका सदस्य, सफाइ अभियानकर्मीलगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ । छठ मनाउने क्रममा फोहर जम्मा भएकाले चार दिनसम्म निरन्तर गुह्येश्वरी–गौरीघाट क्षेत्रमा सफाइ अभियान चलाइने अध्यक्ष पुडासैनीले बताए । भक्तजनलाई मञ्चले नदीको सौन्दर्यता नबिग्रने गरी पर्व मनाउन आह्वान गर्दै माइकिङसहित जनचेतनामूलक अभियान चलाएको थियो ।
पोखरामा पनि मनाइयो छठ पर्व
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्दै पोखरामा पनि छठ पर्व बुधवार विधिवत रुपमा सम्पन्न भएको छ । जलाशयको किनारमा छठ पूजाका लागि राखिएका ठेकुवा, भुसुवा, केरा, मिठाई, उखुलगायतका प्रसाद सूर्यदेव र षष्ठी माता अर्थात् छठी मातालाई अर्घ्य अर्पन गरेपछि पर्व सम्पन्न भएको हो ।
श्रीमानको लामो आयु र आरोग्य तथा सुस्वास्थ्यका लागि छठ
रुपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका–१, घमाहा खोलामा उल्लासपूर्ण वातावरणमा छठ पर्व सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर रातभर जाग्राम बसेको स्थानीयवासी सेतही लोधले बताए ।
छठ पूजा गर्ने स्थल ध्वजापताकाले सजाइएको थियो । राम्रा र सुकिला लुगा लगाएर खोलामा पानीभित्र रहेर महिलाले सूर्यदेवको आरधाना गर्दै अर्घ्य दिएर दीप प्रज्जवलन गरेका थिए । छठ पर्व यस क्षेत्रमा सात वर्षदेखि मनाउन थालिएको स्थानीयवासी दौलती लोध बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘श्रीमानको लामो आयु र आरोग्य तथा सुस्वास्थ्यका लागि छठ मनाइन्छ ।’
समाज र परिवारको हितका लागि सङ्कल्प
आस्थाको महापर्व छठका ब्रतालुले बुधवार यहाँ उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई पर्वको समापन गरेका छन् । ब्रतालुले गङ्गासागर र अरगजा लगायतका पोखरीमा दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दूर लगाई अक्षता, फूल लिई आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएका सामग्री र घरमा बनाइएको विशेष प्रकारको पकवान सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरेका थिए ।
अर्घ्यमा ठकुवा, कसार, केरा, उखु, मेवा मिष्ठान, गेडागुडी र विभिन्न वनस्पति, भुसवा, माटोको हात्ती, सूप, कनसुपती, कलशसहितको घैँटो सूर्यलाई अर्पण गर्ने चलन छ । सूर्यलाई दिइने अर्घ्यमा ठकुवालाई समृद्धि, उखुलाई आरोग्य, केरालाई विष्णु र कृषि उत्पादनलाई प्रकृतिप्रति कृतज्ञताको द्योतक मानिन्छ । छठको मूल सन्देश भनेकै समन्वय, समावेशी र सादगीपन हो । छठ पर्व महिलाको अगुवाइमा समाज र परिवारको हितका लागि सङ्कल्प गरिन्छ, जो यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
जनकपुरमा छठ पर्व मनाउँदै स्थानीय ।
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १९:५०
गंगा सागर, घमाहा खोला र निगौल ठाकुर पोखरीमा छठ पर्वको यस्तो छ तयारी (तस्वीर)
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १५:५१
छठ पर्वः आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइने
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १२:४०
छठका लागि मात्रै भारतबाट ४० लाखको केरा आयात